Fomba fampiharana ny fitehirizana fanafody azo antoka amin'ny ankizy ao an-trano - Wellness | Desambra 2021
Fiaraha-Monina Community, Company Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fiaraha-Monina, Fahasalamana Orinasa, The Checkout Fanabeazana Ara-Pahasalamana Orinasa Fanatanjahan-Tena Mavesatra News Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Vaovao, Wellness Fahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao
Tena >> Wellness >> Mampihatra fitehirizana fanafody azo antoka amin'ny ankizy ao an-trano
Mampihatra fitehirizana fanafody azo antoka amin'ny ankizy ao an-trano
Matetika fanasitranana ny fanafody, manome fanampiana rehefa marary ianao. Saingy, eo am-pelatanan'ny ankizy, mety hampidi-doza izy ireo, na hahafaty mihitsy aza. Tamin'ny taona 2017 fotsiny, nisy fitsidihana maherin'ny 50.000 mankany amin'ny efitrano fitsaboana maika ny zaza latsaky ny 6 taona noho ny fanapoizinana fanafody tsy nahy, hoy ny Safe Kids, fikambanana tsy miankina miasa izay manampy amin'ny fiarovana ny ankizy amin'ny ratra. Amin'ny ankamaroan'ireny tranga ireny, nahazo fanafody ny ankizy rehefa tsy nitady ireo mpikarakara.
Ny ray aman-dreny sy mpikarakara rehetra dia manomboka amin'ny fikasana tsara indrindra ary mitahiry pilina amin'ny toerana tsy azo aleha, nefa mandresy indraindray. Raha tazo ny zanakao dia mety ho voan'ny stash ianao Tylenol amina famantaranandro, avelao eo amin'ny latabatra an-dakozia, na manipy azy ao anaty kitapo tote rehefa lany ny varavarana.
Ao anatin'ireny fotoana ireny no ahitan'ny ankizy kely fanafody amin'ny toerana tazano sy ahatongavana - toy ny countertops, boaty, kitapom-batsy, kitapo diaper, vata fampangatsiahana, ary arimoara. Tatitra maromaro no manondro fa amin'ny ankamaroan'ny fanapoizinana tsy nahy nahatafiditra ankizy kely, ny fanafody dia tsy tao amin'ny toerana fitahirizany mahazatra na mahazatra.
Torohevitra fitehirizana zaza 5 azo antoka
Ahoana no itahirizanao fanafody? Ampiasao ireo hevitra fitehirizana fanafody ilaina hitazomana ny zanakao ireo.
1. Mieritrereta fanafody amin'ny ankapobeny.
Ny fanafody rehetra — ao anatin'izany ny fivarotana ambin-tsolika sy ny raokandro na ny fanafody fanampiny — dia mety hampidi-doza ho an'ny ankizy, hoy i Jeanie Jaramillo-Stametz, Pharm.D., Mpampianatra mpanampy amin'ny fampiharana farmasia ao amin'ny Texas Tech University Health Science Center, Sekolin'ny fivarotam-panafody. na dia mitete ny maso SY crème diaper mety hiteraka loza ateraky ny fiarovana. Mba hahazoana antoka fa mora ny mamantatra ny fanafody dia tazomy ao anaty fonosiny voalohany.
2. Ataovy izay tsy hahatratrarana sy fahitana ny meds.
Tehirizo hatrany amin'ny toerana miafina sy avo ny zava-mahadomelina, voafehy tsara sy voafidy tsara, hoy ny dokotera Jaramillo-Stametz. Rehefa mamaritra toerana tsara dia tadidio fa ny ankizy dia mpihanika (ohatra, mankany amin'ny trano fidiovana hahatratra ny kabinetra fanafody). Ny tatitry ny Safe Kids 2017 dia nanambara fa amin'ny antsasaky ny tranga fanapoizinana fanafody ivelan'ny fivarotana dia satria nisy zaza nihanika tamin'ny seza, kilalao na zavatra hafa hahatratra azy.
3. Aza miantehitra amin'ny fonosana tsy mahazaka zaza.
Ny satroka azo antoka ho an'ny ankizy sy ny fiarovana ny zaza dia forona lehibe tokoa - fa aza avela hampiala anao amin'ny fahatsapana fandriam-pahalemana diso izy ireo. Ny kapila fiarovana azo antoka dia tsy zaza- famantarana , Dr. Jaramillo-Stametz dia nanamafy. Zaza izy ireo- mahatohitra , saingy misy ankizy any izay mbola afaka manokatra ireto satroka ireto.
Ny ray aman-dreny sy ny mpikarakara dia tokony miantoka mandrakariva ny firakofam-panafody voahidy tsara: ahodino mandra-pandrenesanao tsindry iray na tsy azonao ahodina lavitra.
4. Ampianaro ny ankizy momba ny fiarovana ny fanafody.
Na dia mbola kely aza dia zava-dehibe ny fanabeazana ny zanakao momba ny fiarovana ny fanafody. Aza mamaritra ny zava-mahadomelina ho toy ny vatomamy, ary alao antoka fa fantatr'izy ireo fa ny olon-dehibe ihany no afaka mamoaka fanafody. Tokony hampitandrina azy ireo koa ianao mba tsy hihinana pilina hafa, toy ny renibeny na sakaizan'ny mpianatra iray. Farany, ampianaro azy ireo ny fomba famakiana mari-pamantarana zava-mahadomelina - na dia amin'ny fanafody tsy amidy aza. Tokony ho fantatry ny zanakao fa ny labely dia fitsipika fa tsy torolalana. Rehefa mihalehibe izy ireo dia hazavao amin'ireo zatovo sy zatovo mialoha fa ny fihinanana mihoatra ny fatra natoro dia tsy hanampy azy ireo hihatsara haingana sy handratra azy ireo.
5. Ampianaro ny hafa momba ny fiarovana ny zaza sy ny fanafody.
Mitsikera toy izany koa, alao antoka fa ny mpikarakara hafa (na mpitaiza na raibe na renibe), araho ireto torohevitra azo antoka ireto - na inona na inona an-tranonao na an-tranony. Araka ny Miakatra sy lavitra , fandraisana andraikitra CDC, Saika ny iray amin'ireo raibe sy renibe efatra no milaza fa mitahiry fanafody famandrihana amin'ny toerana mora idirana izy ireo, ary 18% mitazona ireo fanafody tsy voatanisa amin'ny toerana mora azo.
Izany no antony, alohan'ny hitsidihan'ny zanakao ny hafa dia fahendrena ny mangataka amin'ny tompon-trano hametraka fanafody tsy takatry ny saina sy jerena. Lazao koa amin'izay mitahiry fanafody ao anaty poketrany mba hametraka ny kitapony ao amin'ilay toerana fitahirizana fanafody. Avy eo, raha mila manala pilina izy ireo, dia tokony hanao izany ary mamerina avy hatrany ny kitapony amin'ilay toerana sarotra idirana.
6. Arotsaho ny kabinetra fanafody.
Raha manana preskripsi taloha maharitra ianao dia tadiavo ny fomba ahafahanao manao izany ario soa aman-tsara izy ireo amin'ny fametrahana azy ireo ao anaty boaty fanariana fanafody, fanosehana azy ireo, na fampifangaroana azy ireo amin'ny fako. Raha manana pilina tsy voavidy sy tsy misokatra ianao dia diniho fanomezana azy ireo amin'ny asa soa izay afaka mampifanaraka azy ireo amin'ny olona sahirana. Rehefa tsy ao an-trano izy ireo, dia tsy mety hampidi-doza.
Mifandraika: Fomba fanodinana tavoahangy pilina
Xeomin vs. Botox: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Ny voka-dratsin'i Adderall sy ny fomba hisorohana azy ireo
inona no fomba haingana hanamaivanana ny fitohanana
azo antoka i meloxicam raha ampiasaina maharitra
inona no hatao ho an'ny hopitaly masirasira fanafody
aiza no ahafahako mividy singulair amin'ny latabatra
fahasamihafana eo amin'ny fiantohana ara-pahasalamana avo sy ambany
dia fanafody generic mahomby toa ny anarana marika
inona ny syrup kohaka tsara indrindra ho an'ny bronchitis